Nhau - Bellows Seal Valve
KUSHANDISA BASA ROKUSHANDA
Muchikamu chekuchengetedza, ichokwadi kuti iyi vharuvhu inoverengerwa kushoma pane chero imwe mhando, asi vharafu ine zvimwe zvakakosha zvakakosha seinotevera:
1.Useful hupenyu hunovimbiswa.
2.Pane girizi munyatso pane ese mvuto chisimbiso gedhi vharafu pasi pazvino kugadzirwa kuve nechokwadi chakakodzera lubrication pamusoro pejoko gwenzi.
Tambo dzedanda mumhando dzese dzemabellows chisimbiso vharuvhu inofanirwa kuchengetwa yakachena kana zvichibvira uye ichizorwa mafuta nguva nenguva nemafuta ekupisa akakwirira.
Zvinokurudzirwa kuchengetedza kwekudzivirira kunofanira kuitwa kanokwana mwedzi mitatu yega yega.
Iyo yekuchengetedza ine yakanyanya kukosha kana iyo vharafu ichishandiswa kune yakanyanya tembiricha kunyorera kana zvichikosha kushandisa girisi remhando yepamusoro tembiricha.
Panguva ino, zvinoda kuti vharuvhu ishandiswe kubva kuvhurika kusvika pakuvhara, uye zvinopesana.
Sechinongedzo chakazara kusarudzo yevhavha yakakodzerwa nechimwe chinhu chakashandiswa, vheji yegedhi inofanirwa kushandiswa kunyanya kune yakaderera kana yepakati kumanikidza mweya, mitsetse yekutsvaira, kana mamwe masevhisi senge kupisa kupisa. Iyo vharuvhu yepasi inofanira kusarudzwa yepakati kana yakanyanya kumanikidza mweya, uko iko kusiyaniswa kwemidziyo kunogona kuve kune chinetso chekuchengetedza. Iyo inoshandiswawo kune inotyisa kana inoputika midhiya kubata uye mune ese mamiriro kuti dambudziko rinogona kuitika mukuyerera mutemo.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti isu tine yakasarudzika yakagadzirirwa vharuvhu iyo yakaoma kupukunyuka kuenda kune gasi kana fluid inodzivirirwa zvachose. Muvhavha, yakajairika hunde kurongedza inotsiviwa neyakagadziriswa metallic membrane uko kwese kunokwanisika nzira dzinoyerera kuburikidza nedanda kana muviri / bhoneti mubatanidzwa zvakasungwa.
Iwo mabhero mvuto anoshandiswa kune ino vharuvhu akaedzwa kwehupenyu kutenderera kusvika mukuparadzwa, zvichikonzera zvinogutsa bvunzo mhedzisiro inosangana nehupenyu hupenyu nguva, tembiricha, uye kumanikidza zvinodiwa zveASME B16.34.
Stainless simbi Ball Valve, Ndarira Ball Valve, Utsanana Stainless Steel Ball Ball mavharuvhu, Bronze Bhora Valve Ine Ptfe Zvigaro, Stainless simbi Ball mavharuvhu, Chiwanikwa Steel Ball mavharuvhu,